१२ वर्षमै आमा ! - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
काठमाडौं । राममायाः घुटुघुटु पिएर खा । उठ्छेस कि ?
गंगामायाः सके पो उठ्नु ?
१२ वर्षीया सुत्केरी गंगामायालाई तंग्रिनका लागि हर्लिक्स घोलेर खुवाउँदै थिइन्, राममाया । तीन दिनअघि गंगामायाले छोरी जन्माइन् । बज्यै बनेकोमा राममाया खुसी छन् । कलिलै उमेरमा सन्तान जन्माएको छोरीको हेरचाहमा उनी जुटेकी छन् ।
मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिका–७ मा घर छ, उनको । ‘काठमाडौंबाट १५ सय रुपैयाँ बस भाडा लाग्छ,’ नातिनी खेलाउँदै राममायाले भनिन्, ‘मैले १७ वर्षमा छोरा जन्माएँ । छोरीले १२ वर्षमै छोरी जन्माइन् ।’
पुस १८ गते जन्मेकी नवजात शिशुको तौल २ किलो ९ सय ग्राम छ । चार कक्षासम्म पढेकी गंगामाया छोरी हेर्छिन् । मुसार्छिन् । आफैं लजाउँछिन् । मुस्कुराउँछिन् । शल्यक्रिया गरी शिशु जन्माएको कारण उनलाई उठ्नसमेत सकस छ ।
परोपकार प्रसूती गृहको ५ नं. मा बालिका गंगामायाले शिशु जन्माएपछि उनलाई सोध्दै हेर्न जानेहरु बढेपछि नर्सहरु पनि हैरान छन् ।
उनी कलिलै उमेरमा गर्भवती भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो दिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्पर्क गरी उद्धार र उपचारमा चासो देखाउदै थापाथली प्रसुती गृहसम्म ल्याउने काम भएको थियो ।
गंगामायालाई एमबुलेन्समा ल्याई परोपकार प्रसुती गृहमा भर्ना गरिएको थियो । भर्नाका बेला चाँजोपाँजो मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विनोद कुँवर आफैं खटिएका थिए । आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।